खाद्यान्नमा परनिर्भरता कम गर : RajdhaniDaily.com -
Home बिचार खाद्यान्नमा परनिर्भरता कम गर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दैगर्दा खाद्यान्न उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको आँकडा प्रस्तुत गरे पनि यी दुई वर्षमा खाद्यान्नमा नेपालको परनिर्भरता अरू बढ्न गएको छ । सबैभन्दा पहिलो आधारभूत आवश्यकता वा गाँसको स्थिति देशभित्र कस्तो छ भन्ने कुरा नै मिथ्या देखाउन थाल्ने हो भने अन्य कुराको त विश्वास गर्न सकिने आधार नै देखिँदैन । सरकारले प्रस्तुत गर्ने आँकडा यथार्थ र वस्तुवादी हुनुपर्छ । यो झुट्ठा र नौटंकीपूर्ण हुनुहुँदैन । किनकि, जनताले दिनमा न्यूनतम चारपाँचपटक हातमुख जोड्ने र सबैभन्दा परिचित वा जानकार रहने कुराको नै अवास्तविक आँकडा प्रस्तुत गरिएपछि सरकारद्वारा प्रस्तुत अन्य आँकडामा विश्वसनीयता स्वतः रहँदैन । सकारले सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेपछि र कृषि मलमा अनुदान दिएपछि कृषक खुसी र उत्साहित भएर कृषिकर्ममा लागे भन्ने भान परेको छ । तर, देशको कुल खाद्यान्न उत्पादन र विगतको उत्पादनको तुलनामा के कति घटी÷बढी हुन गयो, सो बारे कुनै तुलनात्मक प्रस्तुति रहेन । यसले एकातिर खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएको कुरालाई ढाक छोप गर्न खोजेको अनुभूति गरायो भने अर्कोतिर सिँचाइ सुविधा र अनुदान दिएपछि स्वतः उत्पादन वृद्धि भइहाल्यो भन्ने अवस्तुवादी निष्कर्षलाई बल पु¥यायो । तर, कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक श्रमशक्ति देशबाट दिनहुँ पलायन भइरहेको तथ्य गुमनाम बनाइनु आफंैलाई गुमराहमा राख्नु बराबर हो । यसले सरकारको प्रस्तुतिलाई पनि फिक्का साबित गरिदियो ।
यो दुई वर्षको अवधिमा वर्षे र हिउँदे खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटेन, बरु बढेको छ । सबै मौसममा खाद्यान्न परनिर्भरताले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा चामल, मकै, गहुँ र जौलगायतका खाद्यान्न आयात गर्दा देशको १ खर्ब २३ अर्ब ४५ करोड २ लाख ३९ हजार रकम बाहिरिएको छ । कम्युनिस्टको सरकार छ भनेर मात्र पनि उत्पादन बढ्दैन । हुनसक्छ कम्युनिस्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन्, यो इच्छा वा चाहनाको कुरा हो । तर, व्यवहारमा उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने कुरा निकै जटिल छ । उत्पादक शक्तिको जबर्जस्ती विकास नगरेर, उत्पादनका साधनमा आधुनिकीकरण नगरेर देशको उत्पादन सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन आउँदैन । परिणामतः प्रतिफल पनि हात लाग्दैन र देश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । गाउँगाउँमा कृषि कर्म गर्ने किसान दैनिक अध्यागमनमा ताँती लागेर विदेसिइरहेका बेला कसले खेती गर्ने र उत्पादन बढ्ने ? बरु उत्पादन ह्रास हुँदै गएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण नामको सरकारी संयन्त्र निर्माण गरेर मात्र देशको उत्पादनमा बढोत्तरी हुने कुरा पनि होइन ।
अर्को कुरा, पुरानै तरिकाका कृषिकर्ममा कनिका छरेझैं अनुदान वा कहिल्यै पनि पूरा हुन नसक्ने सिक्टा सिँचाइजस्ता चुहिने र पहिरो जाने कुलो वा नहरका कुरा गरेर पनि देशमा अपेक्षित खाद्यान्न उत्पादन हुन सम्भव छैन । सुधार गर्ने वा जनता झुक्याउने यो तरीका पुरानो हो । यसले गर्दा नै देशलाई आजको यो दर्दनाक हालतमा पु¥याएको यथार्थतालाई भुल्न खोज्नुहुँदैन । देशलाई वास्तवमा उँभो लगाउने प्राथमिक कुरा भनेको खाद्यान्नमा आत्मनिर्भता नै हो । खाने कुराको समस्या हल भएपछि मात्र विकास र समृद्धिको कुरा आउँछन् । जुन देशका जनताले खान नै पाउँदैनन् वा अरू देशको भर पर्नुपर्छ त्यो देशका जनताले कति सोच, समय र कर्म विकास निर्माण वा सिर्जनाका काममा दिन सक्षम हुन्छन् होला ? त्यसैले प्राथमिकताका साथ खाद्यान्न परनिर्भरतामा कमी ल्याउने अथक प्रयत्न गर ।
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सोमबार एकैदिन ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै संक्रमित मृतक संख्या ३ हजार ३ सय ६२ पुगेको छ...
मोरङ । मोरङको सुनवर्सी नगरपालिकामा १ जनाको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको छ । सोमबार मध्यान्न वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर सुनवर्सी-६ तालगाछी की ३० वर्षीया...
प्रदेश ५ Sushila Bishwokarma - December 22, 2020 0
रुपन्देही । दाजुले आफ्नै बहिनीमाथि लगातार सात वर्षसम्म बलात्कार गरेको रहस्य खुलेको छ । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–२ ओढारखोला घर भई हाल बुटवलमा एक संस्थामा...
बिचार Kumar Raut - February 16, 2021 0
प्रदेश Dhruba Lamsal - January 13, 2021 0
स्मार्ट फोन धेरै चलाउदा यौनजीवन निरश
जीवनशैली Dhruba Lamsal - February 24, 2020 0
एजेन्सी । स्मार्टफोनको अत्याधिक प्रयोग गर्नेहरुको बेडरुमको जीवन निरस हुने गरेको छ । सानो स्मार्टफोनको कारण यौन जीवननै बर्बाद हुन पुगेको विभिन्न अध्ययनहरुले...
राजनीति Kumar Raut - July 23, 2020 0
जसपामा जिम्मेवारी बाँडफाँट र मर्यादाक्रममा चर्काे विवाद
Editor-Picks Kumar Raut - August 21, 2020 0
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा जिम्मेवारी बाँडफाँट, पदाधिकारी चयन र नेताहरूको मर्यादाक्रम टुंगो लगाउने विषयमा विवाद भएको छ । साउन अन्तिम साता सम्पन्न...
प्रदेश ३ Dhruba Lamsal - January 2, 2021 0
भर्खरै Roshan Shrestha - March 30, 2020 0
ललितपुर । वाग्मती गाउँपालिका वडा नं ३ भट्टेडाँडाको झाँक्रीडाँडा सडकमा दुर्घटना हुँदा भारतीय दुई साइकलयात्रीको मृत्यु भएको छ । आज बिहान १०....